खेलकुद Archives — Page 23 of 24 — KhabarTweet
प्युठानका वावु–छोरीलाई ‘भोजपुर ट्रेल रनिङ्ग’को उपाधी (फाेटाे फिचर)
भोजपुर । अल्ट्रा म्याराथुन धाविका मीरा राईको सम्मानमा गरिएको भोजपुर ट्रेल रनिङको उपाधी प्यूठानका वावुछोरीले हात पारेका छन् । पुरुष तर्फको उपाधी वुवा दामोदर वुढामगर र महिला तर्फको उपाधी उनकै छोरी हुमी वुढामगरले हात परेकी हुन् । दामोदरले निर्धािरत १७ किलो मिटरको दुरी १ घण्टा ५५ मिनेट ३२ सेकेन्डमा पुरा गर्दै उपाधी जितेका हुन भने, हुमीले निधारित दुरी २ घण्टा ३५ मिनेटमा २७ सेकेन्डमा पुरा गरेका थिइन्...
स्थानीय फुटबल मैदानमा देखिएका यी तीन रेफ्री
भोजपुर । गत महिना भोजपुर सदरमुकाममा सञ्चालित जिल्लास्तरीय प्रथम मेयर कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा तीन मिनी रेफ्रीहरू मैदानमा उत्रिएका देखिए । ती मिनी रेफ्रीहरू थिए, ६ वर्षीय विवेक, साढे सात वर्षीय मिलन र साढे पाँच वर्षीय विनोद । फ्रान्सको राष्ट्रिय फुटबल जर्सी र फित्ते चप्पलमा दिनभर स्थानीय टुँडिखेलको निरीक्षणको अभिभारा पाएका ती तीन भाइहरू खासमा खेल अवधिभर मैदानबाट खेलाडीद्वारा बाहिरिएका ...
मेयर कप फुटबलको उपाधि भोजपुर नगरपालिकालाई (फाेटाे फिचर)
भोजपुर । भोजपुरमा जारी जिल्लास्तरीय प्रथम मेयर कपको फुटबल प्रतियोगितामा उपधि कोदार फुटबल क्लवले हात पारेको छ । आइतबार सम्पन्न भएको शनिबार भएको फाइनल खेलमा भोजपुर–११ ले षडानन्द नगरपालिकालाई –१० लाई ४–३ गोलअन्तरले पराजित गर्दै उपधि हात पारेको हो । पहिलो खेलमा भोजपुर ११ का सुजित श्रेष्ठले ९ मिनेटमा र विजय भुजेलले १९ मिनेटमा गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए । दोश्रो हाफकै विकेश राइले ४३ मिनेट ...
भोजपुरमा प्रथम मेयर कपको फाइनलमा दिङ्ला र कोदार
भोजपुर । भोजपुरमा जारी जिल्लास्तरीय प्रथम मेयर कपको फुटबल प्रतियोगितामा षडानन्द नगरपालिका दिङ्ला र कोदार फुटबल क्लब फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । शनिबार भएको सेमी फाइनलको पहिलो खेलमा षडानन्द नगरपालिकाले भोजपुर ११ लाई ५–१ गोलअन्तरले पराजित ग¥योे दिङ्लाका हेम कुमारले ४, ४९ औँ र ५४ औँ मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए । त्यस्तै जितवल राईले ४१ र ७९ औ मिनेटमा गोल गर्दै फाइनलमा पु¥याउन सफल भएक...
प्रथम जिल्लास्तरीय मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता सुरु, पहिलो खेलमा भाेनपा ११ र ९ विजयी (फाेटाे फिचर)
भोजपुर । प्रथम जिल्लास्तरिय मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता २०७४ खेल आईतबारदेखि स्थानीय टुँडिखेलमा सुरु भएको छ । आज भएको पहिलो खेलमा भोजपुर नगरपालिका वडा नं १, हेलौँछा र भोजपुर नगरपालिका वडा नं ११, आम्तेक विच भएको खेलमा वडा नं ११, आम्तेकले वडा नं १, हेलौँछालाई ३–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको छ । पहिलो खेलमा भोजपुर नगरपालिका ११ का सुन्दर राईले गोल गर्दै खेललाई अग्रता दिलाएका थिए । खेल शुरु भएको ३१ औ मिनेटम...
आइतबार, आश्विन २२, २०७४
सातौ अरुण भ्याल्ली रनिङ्गशिल्ड फुटवल प्रतियोगिता हुने
संखुवासभा । संखुवासभा जिल्लाको सदरमुकाम खाँदबारी स्थित मानेभन्ज्याङमा २०५० सालदेखि नियमित रुपमा आयोजना हुँदै आएका सातौ अरुण भ्याल्ली रनिङ्गशिल्ड फुटवल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ । स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने नाराका साथ सामाजिक सद्भावका लागि युवा एकता, बिकृति र बिसंगतिका बिरुद्ध खेलकुदद्धारा सहकार्यको प्रतिवद्धता भन्ने उद्देश्य राखि एडभान्स क्लव मानेभन्ज्याङ तथा अरुण एड...
बालक्लबद्वारा जिल्ला स्तरिय वक्तृत्वकला प्रतियोगीताको छनौट कार्यक्रम सुरु
संखुवासभा । संखुवासभाको माध्यमिक विद्यालय स्तरको वक्तृत्वकला प्रतियोगीको छनौट कार्यक्रम अन्तर्गत संखुवासभाको चैनपुरमा आज सम्पन्न भएको छ । जिल्ला बाल क्लब समन्वय समिति संखुवासभाले आयोजना गरेको यस प्रतियोगीताको खाँदबारी र चैनपुरमा छनौट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । शनिबार चैनपुरको दिलकुमारी स्मृति भवनमा भएको प्रतियोगीताबाट सरस्वती मा.वि. चैनपुर कक्षा १२ की छात्रा सविना धिताल र सारदा उच्च मा.वि. कक्ष...
भदौ १९ देखि इटहरीमा अन्तर मा.वि सांसद कप हुने
सुनसरी । जिल्ला स्तरीय अन्तर मा.बि सांसद कप इटहरीमा हुने भएको छ । १० माध्यामिक विद्यालयको सहभागीता रहेको खेल भदौ १९ देखि हुने भएको हो । इटहरी फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरको आयोजनामा हुने प्रतियोगिताको बिजेताले नगद २० हजार मेडल ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने छ भने उपबिजेता टोलिले नगद १० हजार ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने छन । त्यस्तै बिजेता र उपबिजेता हुने दुबै टोलिका सम्पुर्ण सदस्यले एक–एक थान...
बिराट फुटवल कप दोस्रो संस्करण भदौ ९ देखि हुने
बिराटनगर । पूवार्ञ्चल क्षेत्रकै भब्य कर्पोरेट फुटवल प्रतियोगिता बिराट फुटवल कपको दोस्रो संस्करण हुने भएको छ । प्रतियोगिताको पहिलो सस्करण गत बर्ष बिराटनगरमा भव्यताकासाथ सम्पन्न भएको थियो । १६ वटा बिभिन्न टिमको सहभागिता रहेको उक्त प्रतियोगितामा गत बर्ष मनमोहन पोलिटेक्निक कलेज मकालु टेलिभिजनलाई हराएर बिजयी भएको थियो । पुर्वान्चलका बिभिन्न बिजनेस हाउस तथा बैंकहरुको सहभागिता रहने उक्त प्रतियोगितामा ...
काठमाडौँ । कप्तान सन्दीप लामिछानेको उत्कृष्ट बलिङसँगै नेपालले यू–१९ विश्वकप छनोट क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ । सिङ्गापुरमा भइहरेको आईसीसी एसिया यू–१९ विश्वकप छनोटमा आज नेपालले दोस्रो खेलमा मलेसियालाई पाँच विकेटले पराजित गरेको हो । सिङ्गापुर क्रिकेट क्लबमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको थियो । सन्दिपको कसिलो बलिङका कारण मलेसियाले २५ दशमलव पाँच ओभरमा मात्र ५८ रन ...